नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com): ए एन ए सम्मेलन शुरु, यस्तो रह्यो उद्घाटन समारोह, हेर्नुस् भिडियो र फोटोहरु ! पूर्व अध्यक्ष्यहरु सम्मेलनमा अनुपस्थित !
ए एन ए सम्मेलन शुरु, यस्तो रह्यो उद्घाटन समारोह, हेर्नुस् भिडियो र फोटोहरु ! पूर्व अध्यक्ष्यहरु सम्मेलनमा अनुपस्थित !
ए एन ए भित्रको गुटबन्दी र बिबादको असर यसरी देखियो, बिबाद र गुटबन्दी नगरी दुबै पक्ष मिलीदिएका भए कती राम्रो हुँदो हो, यसमा दुबै पक्षले ध्यान दिउन, हाम्रो जस्तै उपस्थित सबैको एउटै भनाइ थियो "हामीलाई फुटेको होइन जुटेको ए एन ए चाहिन्छ, जुँगाको लडाईं लड्नेहरु होइन निस्वार्थी नेत्रित्व चाहिन्छ ।" उदघाटन समारोहका फोटोहरु र भिडियोहरु आफै यसरी बोल्छन हेर्नुस् भित्र .....!
फोटोहरु स्लाइड शो मा हेर्नुस् !
उदघाटन समारोहमा भन्दा बरु कबिता महोत्सबमा बरु उपस्थिती अलिकती राम्रो देखियो तर यो पनि प्रयाप्त थिएन, किनकी यो अन्तरराष्ट्रिय कबिता महोत्सब थियो ! हेर्नुस् भिडियो र फोटोहरु आँफै यसै बोल्छन ।
ANA Media Forum's Photo
ANA sanghiyata Forum
अरु कार्यक्रम खल्ला भए पनि अन्तराष्ट्रिय कबिता महोत्सब र रातिको ट्यालेन्ट शो अत्यन्त आकर्सक थियो र प्रसँसा गर्न योग्य थियो, यस्तो राम्रो कार्यक्रम तर हल आधा खाली देख्दा मन खिन्न हुन्थ्यो !
नुवाकोटका कवि तामाङलाई उत्कृष्ठ पुरस्कार
यस बर्षको हेम सरिता भानुभक्त काब्य पुरस्कार नुवाकोटका कवि रामबहादुर तामाङको कविता ‘सम्बोधन’ लाई प्रदान गरिने भएको छ । १ हजार अमेरिकी डलर राशी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिने छ । यसैगरी शर्मा मुडभरी मोतिराम काब्य पुरस्कार क्यानाडामा वसोबास गर्दै आउनु भएकी भावना पोखरेको कविता ‘चराहरु’ लाई दिइने भएको छ । दोस्रो स्थानको यो पुरस्कारमा ३ सय डलर र प्रमाणपत्र रहेको छ । यसैगरी पोखराका शरण आ“शुले बशुन्धरा गणेश रोक्का देवकोटा काब्य पुरस्कार जितेका छन् । यसमा २ सय डलर नगद र प्रमाणपत्र रहेको छ । नेपाली साहित्य प्रतिष्ठान उत्तर अमेरिकाको आयोजनामा सम्मेलनस्थलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कविता महोत्सव २०११ को अवसरमा यो पुरस्कारको घोषणा गरिएको हो । नेपाली साहित्यको कविता विधामा प्रदान गरिने यो पुरस्कार सम्भवतः सबैभन्दा बढी धनराशीको हो ।
- GUNARAJ LUITEL
Please wait for more video and photo
Posted by www.Nepalmother.com at 2:58 PM
Milan K. Shahi July 2, 2011 at 11:54 PM
Mulako Saag Bhayechha ANA Convention ta.